(Hadhwanaagnews) Tuesday, February 13, 2018 12:10:55
Maayarada intooda badani waxay ka dhaqdeen duunyo iyo daaro badan cashurteenna, bidoodu hanti hore umay lahayn. Shaqada keliya ee ilaa hadda ay u qabteen
Maayarada intooda badani waxay ka dhaqdeen duunyo iyo daaro badan cashurteenna, bidoodu hanti hore umay lahayn. Shaqada keliya ee ilaa hadda ay u qabteen si xilkasnima ahi waa
dantooda gaarka ah iyo boobka danta guud iyo cashuurta wadhatada. Badhkooda waa hantiilayaal boqolaal baloog u seesan yihiin, qasanadahoodana ka buuxshay xaaran. Waxase eeganaya shacabka oo badh reer ku difaaca iyo badh aan xaqooga garanayn u qaybsamay.
Dhamme sadiiq : [email protected]